ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုကိုလျှော့ချခြင်းအကြားဆက်စပ်မှုလမ်းကြောင်းများ (2017) - Your Brain On Porn
comments: ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ဦးစလုံးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုကိုလျှော့ချရန်ဤလေ့လာမှု link ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုပြုလည်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေပိုနှစ်သက်နှင့်ဆက်စပ်သောခံခဲ့ရကြောင်းအစီရင်ခံမသာ porn လိင်စိတ်နိုးထအောင်မြင်ရန် (သို့မဟုတ်လိုအပ်နေ?) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအကြောင်းကိုကောက်နှုတ်ချက်:
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script ကိုသီအိုရီ, လူမှုရေးနှိုင်းယှဉ်သီအိုရီများနှင့်ညစ်ညမ်း, လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအပေါ်ကြိုတင်သုတေသနပြုခြင်းဖြင့်အကြောင်းကြားသဖြင့်ပဲ့ထိန်း, လိင်ကွဲအရွယ်ရောက်ပြီးပစ္စုပ္ပန်စစ်တမ်းလေ့လာမှုညစ်ညမ်းသောအမြင်ကနေတဆင့်လျှော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုပိုမိုမကြာခဏညစ်ညမ်းစားသုံးမှုချိတ်ဆက်နေတဲ့အယူအဆရေးရာမော်ဒယ်စမ်းသပ်ပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏မူလတန်းအရင်းအမြစ်, ပူးပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ညစ်ညမ်းများအတွက်ဦးစားပေးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး၏တန်ဖိုး။
လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအပေါ်မှီခိုနေရသူများကိုအကြံပေးခဲ့သည့်လက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်များထံမှအစီရင်ခံစာများနှင့်ကိုက်ညီသည် (Brooks, 1995; Levant & Brooks, 1997; Schneider & Weiss, 2001; Stock, 1997), ကျွန်ုပ်တို့သည်နှိုင်းယှဉ်ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားသည်မှာယောက်ျားများဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် နှင့်အမျိုးသမီးများသည် ၄ ​​င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအစားလိင်စိတ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေရန်အတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုမှီခိုအားထားခဲ့ကြရပြီး၊
လိင်စိတ်နိုးထအောင်မြင်ရန် (ဖြစ်ကောင်းလိုအပ်နေ) porn သာ. နှစ်သက်အကြောင်းကိုကောက်နှုတ်ချက်:
Peter and Valkenburg ရဲ့ (၂၀၀၉) သုံးလှိုင်းအလျားလေ့လာမှုမှာလှိုင်းတစ်ခုမှာလိင်စိတ်မကျေနပ်မှုကိုလှိုင်းတစ်ခေါက်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်ခြင်းသုံးစွဲခြင်းကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်လှိုင်း ၂ မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာစားသုံးမှုကိုကြိုတင်မခန့်မှန်းခဲ့ပေမယ့်လှိုင်း ၂ မှာလိင်ကိစ္စမကျေနပ်မှုကလှိုင်းသုံးခုမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာစားသုံးမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ခဲ့တယ်။ ဤရလဒ်သည်အနည်းဆုံး“ အောက်သို့လှည့်နေသော” ပုံစံနှင့်ကိုက်ညီသည်။ မီဒီယာသုံးစွဲမှုသည်စားသုံးသူများ၏အမြင်များနှင့် ဦး စားပေးမှုများကိုဆိုးရွားသောနည်းလမ်းများဖြင့်ပြောင်းလဲစေသည်၊ ၎င်းသည်ထိုမီဒီယာကိုသုံးစွဲရန်သူတို့၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးစေသည် (Slater, Henry, Swaim, & Anderson, 2009) ။ ဥပမာအားဖြင့်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားပူးပေါင်းမှညစ်ညမ်း သာ. နှစ်သက်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကြိမ်နှုန်းအကြားအသင်းအဖွဲ့များ, နှင့်လိင်မကျေနပ်မှုအပြန်အလှန်ဖြစ်ကြောင်းဖွယ်ရှိပုံရသည်။ ယခင်ကဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, masturbatory အေးစက်နောက်ဆုံးမှာသူတို့ကိုနှင့်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုလျှော့ချအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်ပြတ်မှုမှအဓိကဦးဆောင်, လိင်ပူးပေါင်းမှညစ်ညမ်းပိုနှစ်သက်ဖို့မကြာခဏစားသုံးသူဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။ သူတို့ဖြစ်လာပူးပေါင်းလိင်နှင့်အတူပိုမိုမကျေနပ်, ပိုသူတို့ညစ်ညမ်းစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်တိုက်ပိတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်မှပိုကောင်းတယ်ဖြစ်ကြောင်းရိပ်မိစေခြင်းငှါ, ပိုမကြာခဏသူတို့ညစ်ညမ်းလောင်လိမ့်မည်။
ရှင်ပေါလုဂျေ Wright, Chyng Sun က, Nicola ဂျေ Steffen & ရောဘတ်အက်စ် Tokunaga
စာမျက်နှာများ 1-18 | ရရှိထားသည့် 08 နိုဝင်ဘာ 2016, လက်ခံ 18 ဧပြီ 2017, အွန်လိုင်း Published: 09 မေလ 2017
လူမှုရေးနှင့်လက်တွေ့စိတ်ပညာရှင် ပို. ပို. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးရလဒ်များအပေါ်ညစ်ညမ်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆန်းစစ်နေကြသည်။ အချို့သောပညာရှင်များအကြံပြုကြပြီအရေးပါသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးရလဒ်ညစ်ညမ်းကလွှမ်းမိုးနေသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script ကိုသီအိုရီ, လူမှုရေးနှိုင်းယှဉ်သီအိုရီများနှင့်ညစ်ညမ်း, လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအပေါ်ကြိုတင်သုတေသနပြုခြင်းဖြင့်အကြောင်းကြားသဖြင့်ပဲ့ထိန်း, လိင်ကွဲအရွယ်ရောက်ပြီးပစ္စုပ္ပန်စစ်တမ်းလေ့လာမှုညစ်ညမ်းသောအမြင်ကနေတဆင့်လျှော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုပိုမိုမကြာခဏညစ်ညမ်းစားသုံးမှုချိတ်ဆက်နေတဲ့အယူအဆရေးရာမော်ဒယ်စမ်းသပ်ပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏မူလတန်းအရင်းအမြစ်, ပူးပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ညစ်ညမ်းများအတွက်ဦးစားပေးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး၏တန်ဖိုး။ အဆိုပါမော်ဒယ်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးတွေအတွက် data ကိုကထောက်ခံခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကြိမ်နှုန်းပူးပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး၏တန်ဖိုးအပေါ်ညစ်ညမ်းများအတွက်ဦးစားပေးနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏အဓိကအရင်းအမြစ်အဖြစ်ညစ်ညမ်းသိနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားပူးပေါင်းမှညစ်ညမ်း သာ. နှစ်သက်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး devaluing နှစ်ဦးစလုံးလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
KEYWORDS: ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း, စိတ်ကျေနပ်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး